“Labaatan Qodob Oo Waxbarashada & Tacliinta Sare Ee Somaliland Dhabarka Ka Jabiyay.” W/Q: Cabdinaasir | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM “Labaatan Qodob Oo Waxbarashada & Tacliinta Sare Ee Somaliland Dhabarka Ka Jabiyay.” W/Q: Cabdinaasir
Qoraal kooban oo halkan aan ku wadaagi doono, wuxu farta Ku fiiqiyaa qaddar dhalliilo dhinaca “Waxbarashada iyo Tacliinta sare ee Somaliland”
Ka hor inta aynaan u gondo-deggan dhalliilaha waxbarashada iyo Tacliinta sare ee Somaliland wiiqay ee ay u laangadhaynayso. Waxa aan doonayaa in aan qoraalkaygan ku caddeeyo; laba arrimood oo dadku isku xidhaan, hasa yeeshaa, xidhiidhka ka dhexeeya anigu aanan garanayn.
Qofnimada Masuulka iyo Shaqada Qaranka.
Haddii aad damacdo in aad shaqo Qaran oo dayacan farta ku fiiqdo, macneheedu maaha in aad dhaawacday ama weerartay qofnimada masuulka. Sidaa awgeed, ayaan uga afeef dhiganayaa in aanan qofnimada Wasiirka Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee Somaliland, mudane Cabdilaahi Ibraahim Habbane oo Lixdii sanno ee ugu dambaysay xidhiidh wanaagsan naga dhexeeyay. Saaxiibnimada naga dhexaysa Wasiir Cabdilaahi, ma dabrayso in aan tilmaamo dhalliilaha Waxbarasho iyo Tacliin ee dalka ka jira. Gun-gaadhka afeeftaydan waxa weeyaan in xidhiidh kasta oo wanaagsan oo mas’uul naga dhexeeya, aanu dammaanad qaadayn in aanan qabyada shaqada qaranka ee uu mas’uulkaasi hayo sheegi karayn.
Halkan Somaliland dadku waxbarashada ahmiyadda ugu sarreysa ayay siiyaan. Waalidiintu dakhligooda qaddarka ugu badan ayay waxbarashada ku bixiyaan. Sidoo kale, da’yartu wakhtigooda ugu badan goobaha waxbarashada ayay ku qaataan; Aroorta hore haddii aad magaalooyinka waaweyn ee Somaliland aragto da’yartu sida hirarka mawjadaha badda ayuu hirba hir daba socdaa. Wakhtiyada Casarka-dheer iyo Caweyskii sidoo kale ayay jidadka ardaydu u qulqulayaan. Sawirkaasi wuxu marag ka yahay” AQOON JECEYLKA DADKA.”
1.01. AQOONTA AYAA NOQOTAY ISHA UGU WEYN EE DEGDEG LOOGA XOOLAYSTO
Dad badan baa markii ay arkeen in aqoontu ahmiyaddaa dalka ka leedahay, ayay badani ka dhex arkeen suuq ganacsi oo adduun badan si sahlan looga heli karo. Taasina waxa ay keentay in ay dugsiyo yagleelaan dad aqoonta aan ehel u ahayn oo ganacsi ahaan u galay. U jeeddada ugu weyn ee ay ka leeyihiinna waa mid dhaqaale. Sidaa darteed, ayay wax walba uga horreysiiyaan in ay lacag ka helaan dugsiga. Taasina waxa ay dhaawacday dhawriddii tayada waxbarashada.
1.02. XULASHADA BAREYAASHA OO ARDAYDU JAAN-GOYSO
Marka dugsigu, koolejku ama jaamacaddu ay xulanayso macallin, waxa macallinkaa shardiga ugu weyn ee lagu xidhaa uu yahay in uu ardayda qanciyo. Qodobkan waxa saameyn xooggan ku leh qodobka (1.01) ee aan kor ku soo xusnay.
Halkii macallinka aqoontiisa,kartidiisa,hannaanka cashar gudbintiisa iyo wixii la hal-maala lagu xulan lahaa, ayaa lagu xulanayaa in ardaydu raali ka noqoto. Waayo aragnimo macallinnimo oo todoba sanno ahayd waxa aan ka dhaxlay in ardaydu macallinka u wanaagsan ee layliyada badan u dira ama habsankooda kula xisaabtama ay neceb yihiin. Sidoo kale, ay jecel yihiin macallinka inta badan u sheekeeya.
Si kas-gal ah haddii aad u fikirto haddii ardaygu uu leeyahay awood uu ku qiimeeyo macallinka, muxuu ardaynimada ku falayaa? Arrintani xagal-daaca ayay aqoonta qayb ka tahay.
1.03. DOORKII DAWLADNIMO EE TAYO-DHOWRKA WAXBARASHO OO DOQONNIMOOBAY
Dawladda Somaliland oo aan siyaasad cad oo cilmi-baadhis ka shidaal qaadata aan u dejin tubta waxbarasho ee dalka. La’aanta siyaasad waxbarasho oo baahida dalka laga unkay, ayay ka dhalatay habqan-baaha waxbarasho ee dalka ka jira.
Umalayn maayo in wali Wasaaradda Waxbarashad iyo Tacliinta sare is-weydiisay su’aashan:
– Hannaankeena waxbarasho waa mid muwaadin sidee u eg barbaarinaya? Haddii weydiintaa jawaab ku filan loo raadinayo waxa ka dhalan lahaa, siyaasad cad oo jeexda jidka waxbarasho ee dalka.
1.04. LOOLANKA MANHAJYADA QALAAD
Fagaaraha waxbarashada Somaliland waxa ku hirdamaya manhajyo dawlado qalaad ay dabada ka riixayaan dawlado shisheeye. Kuwaas oo qaarkoodna faro-gelin toos innagu sameeyaan, kuwa kale na mid dadban.
Ula-jeedkooduna waa in ay hannaanka waxbarasho ee Somaliland soo barbaraariyo muwaadin muwaadin qolfoofkiisuna Somalilander yahay, fikir ahaanna iyaga uga eeg oo matali kara.
Siyaasadaha waxbarasho ee dalka ku cartamayaa waxa ay qayb ka yihiin, curyaaminta hannaan waxbarasho oo dhammaystirin soona saari kara muwaadin aqoontiisu dalkiisa iyo dadkiisa u adeegto.